Being late is unprofessional! - Sales Training Programs by Charisma
ဖောက်သည်တွေနဲ့ ပထမဆုံးအချိန်တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာ first impression က အရေးကြီးပါတယ်။ မိမိနဲ့ ကနဦးတွေ့ဆုံမှုအပေါ် မူတည်ပြီး ဖောက်သည်တွေဟာ မိမိနဲ့ အလုပ်ချင်စိတ်ရှိ/မရှိ မိမိဟာ ယုံကြည်လောက်တဲ့သူ ဟုတ်/မဟုတ်ဆိုတာကို ၁၅စက္ကန့်ကနေ စက္ကန့်၃၀အတွင်း ဆုံးဖြတ်လေ့ရှိကြတယ်လို့ customer behavior နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လေ့လာသုံးသပ်မှုတွေက ဆိုတယ်။ (How to gain your customer’s trust ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သီးသန့်ရေးပါဦးမယ်) First impression တွေထဲမှာ အချိန်မှန်ကန်တိကျခြင်းဆိုတာ (always be on time) ထိပ်ဆုံးက ပါဝင်ပါတယ်။
အခုလို မိုးတွေရွာ ကားတွေပိတ်နေတဲ့ အချိန်ကာလမှာ ကျွန်တော်တို့ဟာ ချိန်းထားတဲ့နေရာနဲ့ အချိန်ကို အလျှင်မီရောက်ဖို့ အနဲဆုံး ၁နာရီလောက် စောထွက်ရလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါတောင် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မရောက်နိုင်လို့ customer ကို ဖုန်းဆက်ပြီး တောင်းပန်ရတဲ့ အခါတွေလည်း ကြုံဖူးကြမှာပါ။
တခါတလေမှာ ကိုယ်က ဒီ customer နဲ့ တွေ့ခွင့်ရဖို့ ရက်သတ္တပေါင်းများစွာ စောင့်ခဲ့ရတဲ့သူဆို ပိုဆိုးတာပေါ့။
နောက်ကျတာကို ရှောင်ချင်ရင် ခပ်စောစောထွက်တာပါပဲ၊ ဒါပေမယ့်လည်း ခန့်မှန်းလို့မရတဲ့ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ ကားပိတ်မှု၊ရေကြီးမှု၊ မိုးရွာလို့ ကားပိတ်ရတဲ့ကြားထဲ တကိုယ်ကောင်းဆန်ပြီး စည်းကမ်းမဲ့ယာဉ်မောင်းသူတွေကြောင့် ထင်ထားတာထက်ပိုကြာပြီး လမ်းမှာတင် အချိန်ကုန်သွားတာမျိုးဖြစ်ဖူးကြမှာပါ။ ဒီလို အခြေအမျိုးရောက်လာခဲ့ရင် ဆောင်ရန်/ရှောင်ရန်လေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။
Please be informed – ကြိုတင်အကြောင်းကြားပါ။ ဒီနေရာမှာ အီးမေးလ်(သို့) ဖုန်းဆက်ပြီး အကြောင်းကြားနိုင်သလို sms ပို့ပြီးလည်း အကြောင်းကြားလို့ရပါတယ်။ တစ်ခုသတိပြုရမှာက အီးမေးလ်နဲ့ဆိုရင် အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် မဖတ်လိုက်မိတာ ဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက် sms or call က အဆင်အပြေဆုံးဖြစ်မှာပါ။ အကယ်၍ မိမိနဲ့တွေ့မယ့်သူရဲ့ mobile ဖုန်းနံပါတ်မသိဘူးဆိုရင် အီးမေးလ်ဖြင့် အကြောင်းကြားရုံမက secretary or reception က တဆင့် အကြောင်းကြားပေးခြင်းအားဖြင့် မိမိရဲ့ တဖက်လူအပေါ် လေးစားခြင်းကို ပြသရာရောက်ပါတယ်။
Don’t overcrowd your schedule – Customer များများနဲ့ တွေ့နိုင်လေ အရောင်းဖြစ်ဖို့ရာခိုင်နှုန်းများလေလေပါပဲ။ သို့သော်ငြား မီတင်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခု စိတ်တထင့်ထင့်နဲ့ အသည်းအသန်ပြေးလွှားနေရတာထက်စာရင် မိမိ သွားရမယ့် နေရာနဲအချိန်ပေါ်မူတည်ပြီး သေချာအစီအစဉ် ပြုလုပ်ခြင်းက စိတ်လက်ချမ်းသာစွာ အလုပ်လုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်သလို customer ကလည်း မိမိကို အချိန်လေးစားသူအဖြစ် အမှတ်ပေးမှာပါ။
Beware of time suckers – တခါတလေ အလုပ်ခွင်မှာ လေကျောရှည်တက်တဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်(သို့) အထက်လူကြီးတွေကြောင့် နောက်ကျတာမျိူး ဖြစ်တက်ပါတယ်။ ပြောချင်တာကတော့ အားမနာပါနဲ့၊ယဉ်ကျေးစွာ စကားဖြတ်ပြီး ထွက်ခွာပါ။ နောက်ကျလို့ မျက်နှာပျက်ရမှာက ကိုယ်ပါ၊သူတို့မဟုတ်ပါ။
Turn off your computer – တခါတလေ ကျွန်တော်တို့ဟာ “ငါ အီးမေးလ်လေးတစ်စောင်လောက် ပြန်လိုက်ဦးမယ်” ဆိုပြီး လုပ်တက်ကြပါတယ်။ ဘယ်တော့မှ မလုပ်ပါနဲ့! ကားပေါ်မှာလည်း smart phone တွေနဲ့ အီးမေးလ်ပို့လို့ရပါတယ်။
Be honest – လုံးဝကို နောက်ကျသွားပြီ (သို့) တစ်ဖက်လူက မစောင့်နိုင်လို့ မီတင်းလွတ်သွားပြီဆိုရင် ပေါက်တက်ကရ အပိုဆာဒါး အကြောင်းပြချက်တွေ မပေးပဲ ရိုးသားစွာ ကိုယ့်အမှားကို ဝန်ခံလိုက်ပါ။
Focus on your apology, not lame excuses and apologize immediately – နောက်ကျလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အချိန်မှီမရောက်လို့ လွတ်သွားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် အရင်ဆုံး တောင်းပန်ပါ။ လူချင်းမတွေ့ဖြစ်ခဲ့ရင်တောင် မေးလ်(သို့)ဖုန်းဆက်ပြီး လေးစားစွာ တောင်းပန်ပါ။
Don’t over apologize – လူတိုင်းအမှား လုပ်တက်ကြပါတယ်။ နောက်ကျသွားတဲ့ မီတင်းတစ်ခုအတွက် ရိုးသားစွာ တစ်ခေါက်/နှစ်ခေါက် တောင်းပန်ပြီးရင် မေ့လိုက်ပါတော့။ တစ်ဖက်လူ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်အောင် ထပ်ခါထပ်ခါ မတောင်းပန်ပါနဲ့။
Reschedule the meeting – ပြန်လည်ချိန်းဆိုပါ၊ မိမိကြောင့် မီတင်းလွတ်သွားခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ တစ်ဖက်လူအားမယ့် အချိန်ကိုသာ မေးမြန်းပြီး ပြန်လည်တွေ့ဆုံပါ။
Be there early – ပြန်လည်ချိန်းဆိုပြီးသား မီတင်းတစ်ခုကို ထပ်နောက်ကျတာဟာ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်သင့်တဲ့အပြင် မိမိကို အခွင့်အရေးထပ်ပေးတဲ့ တစ်ဖက်လူကိုလည်း စော်ကားရာရောက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ကလေးကစားနေတာ မဟုတ်ပါဘူး၊ အလုပ်လုပ်နေကြတာပါ။ မှားပြီးသား ကိစ္စတစ်ခုကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်လို့ မရပေမယ့် ထပ်မမှားအောင်လုပ်ဖို့က ကိုယ့်မှာပဲ တာဝန်ရှိပါတယ်။ ဒီ့အတွက်ကြောင့် နောက်ကျမယ်ထင်ရင် ဖောက်သည်ရဲ့ ရုံးရှေ့မှာ ဖျာခင်းအိပ်စောင့်သင့်လည်းစောင့်ရပါမယ်။